[RASMI] SIM Service Unlock - Unlock kaarka SIM aad telefoonka mobile ee 3 tallaabo
dr.fone xidhmo - SIM Service Unlock
Unlock aad telefoonka ee 3 tallaabo fudud!
Fast, ammaan iyo joogto ah
1000+ telefoonada taageeray, 100+ bixiyayaasha network taageeray
60+ dalalka taageeray
Habka ugu fudud, si degdeg ah, ammaan iyo sharci in lagu furo telefoonka.
aad marnaba yeelan doonaan in ay soo celiyaan geedi socodka. Aad u cusbooneysiin karaa software telefoonka ee sida caadiga ah iyo u isticmaali on shabakad kasta oo dunida.
Tilmaamaha la furayay ayaa la shaqayn doona, waayo, phone a madow, laakiin maanka ku hayo in la furayay phone uusan kasoosaaray madow ah. Ayaa aad telefoon la madow? halkan calaamadee
In dhacdo dhif ah aan awoodin in lagu furo telefoonka, sabab kasta oo aannu u mas'uuliyadda, waxaan kuu soo saari doona lacag buuxda.
awoodo inuu isticmaalo telefoonka bixiyaha wax network ee dunida aad u noqon doonaa.
Habkani waa mid joogto ah oo aan xad damaanad aad telefoonka ee.
Your phone marna uu leeyahay in uu ka tago dhinacaaga. Continue isticmaalaya telefoonka inta ay socoto furayay ah.
Dooro aad telefoon iyo buuxinta foomka codsiga.
Wax code furayay by e-mail.
Ku qor code furayay galay telefoonka
Fiiri xaaladda si aad
Unlock aad Phone
Riix logo brand ee ay doortaan aad telefoon, Buuxi foomka codsiga iyo hesho tilmaamo tallaabo-tallaabo furayay by aad e-mail.?Once raacay tilmaamaha noo fudud oo aad telefoonka si degdeg ah oo diyaar u ah quful doonaa si ay u isticmaalaan la network kasta bixiyaha.
dal iyo bixiyeyaasha network Buuxi Dhignaashada
FAQ - furayay Phone
+ Sidee ayaan u furo oo aan telefoonka kula Dr.Fone - SIM Service Unlock?
Si aad u furid aad telefoon kula Dr.Fone - SIM Unlock Service, dooro samaynaysaa, model, dalka iyo network bixiyaha aad telefoon uu xiran yahay si ay u. Marka aan ka helno lacag, codsigaaga loo hawl gelayaa oo gudahood waqti bixinta loogu balan qaadayo waxaad heli doontaa tilmaan fudud oo tallaabo-tallaabo by e-mail ku saabsan sida loo furo telefoonka.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad mar kasta inta lagu jiro habka furayay ah nala soo xiriir via chat, telefoon ama warbaahinta bulshada.
+ Imisa qiimuhu in lagu furo my phone?
Qiimaha code ah furayay kala duwan taas oo ku xidhan dhawr arrimood. Qiimaha saxda ah loo soo bandhigi doonaa marka aad ka dooro samaynaysaa, model, dalka iyo network bixiyaha aad telefoon uu xiran yahay si ay u. Iyo sidoo kale helaya dhimis loogu talagalay furayay kasta, waxaan sidoo kale ka mid ahaa dhimista ilaa 50% on our website.
+ Ma ku furayay joogto ah oo lagu dabaqi karo dibadda?
Haa. Marka aad quful telefoonka Adeegga Unlock SIM aad marnaba yeelan doonaan in ay soo celiyaan geedi socodka. Aad u cusbooneysiin karaa software telefoonka ee sida caadiga ah iyo u isticmaali on shabakad kasta oo dunida.
+ Mudo intee leeg ayay qaadataa in lagu furo my phone?
The time bixinta loogu balan qaadayo waxay ku xiran tahay dalka oo network bixiyaha phone xiran yahay si ay u. jir Markan, iyo sidoo kale waqtiga dhalmada caadiga ah unlockings la mid ah, waxaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda marka aad buuxisid foomka codsiga.